သံပလ္လင် (Iron Throne) - 2Game
▪ Author: Netmarble
▪ Publish date: 20/04/2018
▪ Latest version: 2.0.0
ဒီ Real-time မဟာဗျူဟာ MMO ဂိမ်းခံစားရန်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအင်အားအကောင်းဆုံးမဟာမိတ် Create!
HD ကို Graphics- -Stunning
high-resolution 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူအံ့ဩ, လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင်ခံစားရသည်။
ဂိမ်း MMO- တွေ့ဆုံ -RTS
ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာ Real-time စစ်တိုက်ရာတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံ! အဆမဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုသင်စောင့်ဆိုင်း။
စစ်တိုက် Royale – ယူနစ်ဆုံးရှုံးမရှိဘဲတန်းတူခိုင်ခိုင်လုံလုံအပေါ်တစ်ဦးသက်သက်သာမဟာဗျူဟာမြောက်ပွဲစဉ် Fight!
ရေးအဖွဲ့ Deathmatch – ထူးဆန်းသောအသင်းကစားအတူစစ်ဆောင်လွှမ်းမိုး။
ရှုထောင်တိုက်ပွဲ – ထိုမော်ကွန်းသမိုင်းကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်ဂိမ်းရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဆက်ရေး။
မြို့ Mode ကို – သင့်ရဲတိုက်ရဲ့ townsfolk အတူလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နှင့်အန္တရာယ်ရှိ Quest များဖြေရှင်း။
□ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက် & အသုံးပြုမှုအသေးစိတ်□
– အနိမ့်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: CPU ကိုကို Quad-core 1.2GHz, Ram 1GB
※ဒီ app တက်ဘလက်ကိရိယာများပေါ်တွင်ကစားနိုင်ပါတယ်။ ※
ဒါ့အပြင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်, သင်ကစားရန်အနည်းဆုံးအသက် 13 နှစ်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
– Service ၏စည်းမျဉ်းများ: http://help.netmarble.com/policy/terms_of_service.asp?locale=en
– သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ: http://help.netmarble.com/policy/privacy_policy.asp?locale=en
Android အတွက် သံပလ္လင် (Iron Throne) အလွန်ရေပန်းစားသည်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂိမ်းကစားထောင်ပေါင်းများစွာ၏မည်သည့်ငွေပေးချေမှုမပါဘဲရဖို့အတှကျဝမျးသာပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့သည်သင်ကူညီနိုငျပါသညျ! အခမဲ့ဂိမ်းကို download လုပ်ပါရန်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သောဖိုင်ကိုရွေးသင် file ကိုရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ သံပလ္လင် (Iron Throne) apk download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှငျ့သငျတက်ဘလက်သို့မဟုတ်ဖုန်းများအတွက်ဂိမ်းအပြည့်အဝဗားရှင်းခံစားကြသည်! မိုဘိုင်းဂိမ်းကိုခံစားဖို့အကောင်းဆုံး gadgets တစ်ခုမှာ iPhone ကိုဖြစ်ပါသည်, သံပလ္လင် (Iron Throne) iOS အတွက်ထိပ်တန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမဆိုငွေပေးချေခြင်းမရှိဘဲပြုလုပ်ကစားရန်သင့်ကိုကူညီနိုငျပါသညျ! iPhone အတွက် သံပလ္လင် (Iron Throne) ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိရိယာ၏မော်ဒယ်ကို select ရန်သင့်အားအကြံပြု, ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်ကအသင့်တော်ဆုံးဂိမ်း app များကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုပ်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: လိုချင်သော .ipa ဖိုင်ကိုရွေးသင်ကစားပွဲရချင်သောနညျးလမျးမြား၏တဦးတည်းကိုရွေးပါထို့နောက် "အခမဲ့ သံပလ္လင် (Iron Throne) ကို download လုပ်ပါ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းနှင့်သင်အိုင်ပက်သို့မဟုတ်, iPod တို့အတွက် သံပလ္လင် (Iron Throne) ခံစားနေကြသည်။ ထိုအသတိရ! ကျနော်တို့နေ့စဉ်အခမဲ့ IPA ဂိမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကို update ဒါညှိနေဖို့!
Read more: Iron Throne